टीकटकमा प्रधानमन्त्रीदेखि जुम्ल्याहा किशोरीसम्म, यी हुन् टपटेन नेपाली टीकटक स्टार – Nepal Press
टीकटकमा प्रधानमन्त्रीदेखि जुम्ल्याहा किशोरीसम्म, यी हुन् टपटेन नेपाली टीकटक स्टार
२०७७ पुष १ गते ११:१५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो साझेदारी एप टीकटक ज्वाइन गरेको खबरले टाइमलाइन तात्यो । कुटनीतिक वृत्तमा चर्चा मात्र चलेन इन्डिया टुडेकी वैदेशिक मामिला संवाददाता गीता मोहनले नेपाली प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ एप प्रयोग गरेको ट्वीट गर्दै त्यसलाई कुटनीतिक रङ दिने प्रयास गरिन् ।
एकैरातमा प्रधानमन्त्रीको उक्त खातालाई ३५ हजारभन्दा बढीले फलो गरे । अहिले ओलीलाई टीकटकमा ६४ हजारभन्दा बढीले फलो गरेका छन् । अमेरिका र भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको यो चिनियाँ एपले पछिल्लो वर्ष नेपाली नेटिजनमाझ लोकप्रियता कमाइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार जाेसुकैले गरे पनि अक्षम्य अपराध (part 2)
♬ original sound – KP Sharma Oli – KP Sharma Oli
टीकटकमा नृत्य, अभिनय, सूचना र ज्ञान बाँड्ने तन्नेरी पुस्ताको जमात तयार भैसकेको छ । लकडाउनपछि पोखरेली आकाशमा उड्ने प्याराग्लाइडरको भीड होस् वा तनहुँको मानुङकोटबाट दृश्यपान गर्नेको क्राउड, बन्दाबन्दीपछि सुनसान पर्यटनलाई टीकटकले उकास्ने जमर्को गरेको छ ।
यहाँ नेपालका टपटेन टीकटक प्रयोगकर्ताबारे चर्चा गरिनेछ ।
प्रिन्सी खतिवडा र प्रिज्मा खतिवडा
यी दुई जुम्ल्याहा दिदीबहिनी टीकटकमा सर्वाधिक हेरिने नेपाली प्रयोगकर्ता हुन् । ६.६ मिलियन फलोअर्सले यी दुईलाई पछ्याएका छन् भने ४१.१ मिलियनले लाइक गरेका छन् । टीकटकमा हिट भएपछि उनीहरुको डिमान्ड म्युजिक भिडियो र टेलिभिजन सिरियलमा हुन थालेको छ ।
Timrai Mayale Song❣️ Released on Meksam Naresh official youtube channel.Link is on the bio🥰 #timrai_Mayale ❣️
यी किशोरीको टीकटकलाई ७.२ मिलियन जनाले पछ्याएका छन् । ८९.६ मिलियनले लाइक गरेका छन् । अन्जुले प्रायः डान्स स्किलका भिडियो पोस्ट गर्ने गरेकी छन् ।
♬ original sound – Tabeen
दीपा र दमान्ता
टीकटकमा आफ्ना डान्स र अभिनय कैद गरेर अर्को एक दिदीबहिनीको जोडी हिट भएको छ । २.५ मिलियन जनाले यो जोडीलाई फलो गरेका छन् । ४१.३ मिलियन लाइक छ । रियालिटी टीभी सो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स’मा समेत यी दुईको नृत्य हेर्न पाइन्छ ।
Manaparni phool paye po siraima 🌸🌺New song’ Bhirma Seti Gai’ #twins #deepadamanta #newsong #bhirmasetigai #dance @sagarlamsalkshetr
♬ original sound – Deepa_Damanta
१.७ मिलियनद्धारा पछ्याइएका सञ्जु महर्जनले डान्स र एक्टिङको कलामार्फत धेरैको मन जितेका छन् । ४९ंं.८ मिलियन लाइक बटुलेका उनले टीकटकमार्फत फेसनको ज्ञान पनि बाँड्ने गरेका छन् । कोरियन लुक्सका उनलाई फलो गर्ने टीनएज किशोरी बढी छन् ।
Instagram: sanjumaharjan44 ⚡️#sanjumaharjan44 #foryou #fyp #love #nepal #trending
♬ IK VAARI AA – Sushant Singh Rajput & Kriti Sanon & Jim Sarbh & Varun Sharma
अमु गुरुङ शाह
आफ्ना अनौठो व्यंग्य कलामार्फत अमुले टीकटक प्रयोगकर्ताको मन जितेकी छिन् । १.३ मिलियन फलोअर्स र ३८.४ मिलियन लाइकसँगै उनी नेपाली टपटेनमा अटाएकी छन् । बेजोड हँसाउने कलामार्फत उनलाई पछ्याउनेको संख्या बढेको छ ।
Please don’t 😅my stillabeginner in playing ukelele❤️#nepalitiktoker #nepal #nepali #spreadlove #minionssquad💫 #fyp
♬ original sound – AMU GRG SHAH – AMU GRG SHAH
टीकटक क्वीनको नामले समेत चिनिने घिमिरेको अभिनय र गायन कलाले गर्दा उनलाई पछ्याउनेको संख्या १.२ मिलियन र लाइक गर्नेको संख्या २७.६ मिलियन पुगेको छ ।
Last one on this song !! Suurrri laa !!! 😂#1MANepal #1MADance #again🥶🤗 #racefam #grappss
♬ Genda Phool – Badshah feat. Payal Dev
अभिनय र डान्सको कलामार्फत टीकटकमा हिट भएका सुन्दरलाई फलो गर्नेको संख्या १ मिलियन र लाइक गर्ने १९.९ मिलियन छन् ।
umm milaideu🤣❣❣ #sundarghalanfam #foryoupage #fyp #foryou
♬ original sound – @nabina dahal
बलिउड कलाकारको सपना देख्ने उषा उप्रेतीले अभिनय र डान्समार्फत टीकटकमा प्रसिद्धी बटुलेकी छिन् । महानायक राजेश हमालसँग उनले टीकटक बनाइन् । ९७६.७ हजार फलोअर्स कमाएकी उनले २६.६ मिलियन लाइक समेत पाएकी छिन् ।
Mera dil disturb nahi hua hai 😅🙈 #ushauppreti1 #ushasquad #tiktok #ushasfamily #foryou #fyp #foryourpage #expression #keepsupporting #loveuall
♬ original sound – 🔥 Vims 🤟
नेपाली फिल्मकी अभिनेत्रीको रुपमा यसअघि नै स्थापित वर्षा पनि टीकटकमा हिट छिन् । उनी प्राय डान्स स्किल प्रस्तुत गर्छिन् । ९३४.८ हजार फलोअर्स र १५.२ मिलियन लाइकको साथ उनलाई हेरेर मनोरञ्जन लिनेको संख्या उच्च छ ।
♬ original sound – Aayushi
आँचल शर्मा दवाडी
आँचल पनि नेपाली फिल्ममा स्थापित नाम हो । थुप्रै व्यवसायिक हिट फिल्म पस्किएकी आँचल अहिले टीकटकमा व्यस्त छिन् । हिजोआज उनी आफ्ना पति उदिप श्रेष्ठसँग टीकटकमा प्रस्तुत हुन्छिन् । ६९०.३ के फलोअर्ससहित उनलाई लाइक गर्नेको संख्या १०.६ मिलियन छ ।
#isthatok? #lovehim #hadtodothisone😁 @udipshrestha4
♬ original sound – Aanchal sharma(Dawad
प्रकाशित: २०७७ पुष १ गते ११:१५